Kune vakawanda paIndaneti Mobile cheap car insurance riwanikwe kutamba kuti anotorerwa nomukurumbira vakakurumbira, yepaTV, uye mabhaisikopu. King Kong (Next Gen) mumwe wavo, uye yatova yakakurumbira pakati vanoda slots. Pachishandiswa yakakurumbira 1933 Firimu chimwe chete zita, slots iri nyaya hofori gorira naani anotsamwira chaizvo uye ari munzira yake kuti aparadze New York City. Unofanira kuti aponese guta kubva yaityisa chisikwa ichi uye uchava vanewo kuponesa upenyu Gorilla. Uchawana mimwe mibayiro zvinoshamisa nokuponesa guta. Uchanzwawo kuhwina zvinoshamisa 150 vakasununguka Tunoruka kuburikidza nokuponesa naMambo Kong kubva ndege. kuruka ose uchazara chiito nokukurumidza aifamba uye varaidzo, saka chigadzirirai kuongorora zvakawanda pamusoro inonakidza iyi paIndaneti slots.
The chikwereti yokuita uye nezvekutanga ichi mutambo zvinoshamisa anoenda NextGen Gaming. kambani iyi akabata pamusoro chinzvimbo mazita enyika kutungamirira paIndaneti slots Developers. Hapana mubvunzo, yakanakisisa paIndaneti mutambo Developers vanoshandira ichi kambani uye saka zvinobudirira anotangazve mitambo rakazara kirasi yokutanga Graphics uye inomutsa bhonasi zvinhu. King Kong (Next Gen) ariwo muenzaniso mukuru Developers 'okugadzira zvinhu, izvo ane mukurumbira makuru ari paIndaneti uchitamba mutambo wacho nyika.
Playing King Kong (Next Gen), ane 5×3 nokudzedzereka uye 25 payline paIndaneti slots, chichava chinhu chisingakanganwiki ruzivo kwamuri. The Gwenzi uye mamiriro ezvinhu ari yakashongedzwa nenzira mutambo anotarisa zvikuru zvakafanana sezvo chepakutanga King Kong kufirimu. The Developers vakashandisa kufirimu makuru zvinhu sezvo huru sezviratidzo. King Kong ndiye chiratidzo yomusango uye mutambo wacho Logo ndiyo Kuparadzira chiratidzo. The wagers siyana pakati 25p uye £ 50 uye mumwe kuruka kunokonzera zvinoshamisa Animations paTV.
Kunyika Mambo Kong chiratidzo mhuka chiratidzo panguva vanodzungunyika 3 uye Mambo Kong anoenda Ape kuchiitwa kuchaita kuti pave. Zvino mhuka chiratidzo kuchawedzera uye kufukidza ose nzvimbo pamusoro vanodzungunyika kuburikidza nokupwanya chidzitiro. Izvi zvichakubatsira mubayiro mibayiro guru mutambi, kana mhuka anosika yakanakisisa kuhwina mibairo nevamwe mukuru-ukoshi zviratidzo.
King Kong (Next Gen) paIndaneti slots ane kunoshamisa vakasununguka kuruka kuchiitwa, unonzi King Kong pwanyai dzinoti. Land pasipasi 3 anoparadzira kwese pamusoro Gwenzi shanu uye aya kuchaita kuti kusashanda. Uchava kubatsira Mambo Kong muna nokupwanya ndege. Unogona kukunda kusvika 150 vakasununguka Tunoruka kana zvinobudirira hwaparadza dzose ndege. vakawanda vakasununguka Tunoruka kwakadaro zvichava zvakakwana kuwedzera mijenya pamusoro mibayiro yako uchitamba mutambo wacho nhoroondo uye pakupedzisira kwako akaundi.
King Kong (Next Gen) paIndaneti slots anomiririra okugadzira zvinhu pamusoro NextGen Gaming kwakaita Developers vechokwadi. Aya akapfuma mutambo uri kusarudza chaizvo varaidzo uye kura Unobata.